Nambaran’ny Filoha Rivo Rakotovao fa hiezaka ny Antenimierandoholona hifampiresaka amin’ny Filoham-pirenena manoloana izao toe-javatra izao, saingy nantitranteriny fa ny antompisian’ny mpitondra fanjakana dia ny hampandroso ny firenena ka mila fifampiresahana sy fandinihina lalina ny toe-draharaha tahaka itony. Notsidriany ihany koa, tsy ilaina ny korontana sy ny herisetra fa ao anatin’ny fitoniana tanteraka no tokony hamahana ny olana, satria tsy misy mahazo tombony amin’ny korontana.
Mikasika ity raharaha Tana-Masoandro ity dia nisy ny fivoriana tao amin’ny CFM Ampefiloha, ny zoma 18 oktobra 2019, niarahan’ireo filohan’ny andrimpanjakana efatra, dia Rakotovao Rivo (Antenimierandoholona), Maka Alphonse (CFM), Navony Pierre Lenoble (HCDDED) ary Rabenoro Irène (CNIDH).
Nanao fanambarana iraisana izy ireo taorian’izany, miantso fitoniana amin’izao ankatoky ny fifidianana izao. Miantso ny tomponandraiki-panjakana ihany koa izy ireo hampiato ny fanombohan’ny asa, ary miantso ny vahoaka hampiato ny fihetsiketsehana ka hifanantona. Mahita ihany koa ireto filohan’ny andrimpanjakana ireto fa tsy ampy ny serasera manodidina ny fanatanterahana ny tetikasa eny Ambohitrimanjaka.